VIDEO:Qarax xoogan oo ka qaxray xarunta ciidamada CID ee Muqdisho (DAAWO) – SBC
VIDEO:Qarax xoogan oo ka qaxray xarunta ciidamada CID ee Muqdisho (DAAWO)
Qarax xoogan oo loo adeegsadey baabuur laga soo buuxshay waxyaabaha qarxa ayaa maanta ka dhacay xarunta dambi baarista ciidamada Booliiska Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, kaasi oo geystey khasaare dhimasho & dhaawac isagu jira.
Qaraxan ayaa ka dhacay gudaha xarunta CID-da iyadoo sida Booliisku sheegeen si laab leh loo soo malaagey qaraxan, waxaana sarkaal u hadley ciidamada Booliiska DKMG uu sheegay in afar nin oo ku hubaysnaa qoryo oo watey baabuurka qarxay ay iska dhigeen dabley dhac u geysanaysa dadka shacabka ah, isla markaana mobile-da ka qaadanayey, waxaana markii laga warhelay falkaasi ay sameynayeen ragaasi qabqabtey ciidamada Booliiska kuwaasi ku soo xiray xarunta CID-da.
Laakiin sida laga dhadhansadey hadalka taliyaha ragaasi ayaa qorshahoodu uu ahaa in gudaha xarunta CID-da galaan oo gaarigoodana gudaha la galiyo iyadoo la sheegay in baabuurka ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa.
Mudo ka yar ka dib markii gaariga gudaha xarunta CID-da la soo galiyey ayaa la sheegay in gaarigii uu qarxay iyadoo loo adeegsadey qaraxaasi remote control ama mobile la soo wacay sida laga soo xigtey saraakiisha Booliiska.
Waxyeeladan qaraxan uu geystey ayaa la soo sheegayaa in ay ka mid tahay geerida dad shacab ah iyo ciidamo Booliiska ka tirsan.
Link-ga hoose ka daawo qaraxan oo xoogiisa si weyn looga maqlay magaalada Muqdisho, isla markaana argagax ku abuuray dadka shacabka.Halkan ka daawo